Eden Life na -enweta okirikiri ego mkpụrụ ego $ 1.4M
Igwe dabere na Lagos iji bulie ọrụ mgbazinye ụlọ maka ndị ọkachamara na-arụ ọrụ, na-abụ onye mbụ wulitere ngwa ọrụ ụlọ Africa
Ndụ Eden, Ngwa ọrụ ụlọ mbụ nke Afrịka maka ịhazi usoro nri, ịsa akwa na nhicha, emechala mkpụrụ mkpụrụ $ 1.4m, nke LocalGlobe nke UK na-eduzi, yana ntinye sitere na Samurai Incubate, Future Africa, Village Global, Rising Tide Africa na Enza Capital.
Nke a na-eweta ntinye ego nke Eden Life ruo ugbu a ruo $ 2m na-eso nkwado mkpụrụ sitere na ndị niile bidoro Andela, yana nkwado ngwa ngwa ọzọ n'ime ọnwa iri na asatọ gara aga.
A ga-ebuga isi obodo ọhụrụ ahụ iji wuo teknụzụ ime ụlọ nke Eden Life wee zụlite kichin nke ụwa na ebe a na-arụ ọrụ, ka ọ na-ewulite usoro teknụzụ ọhụrụ iji melite ma too ụlọ ọrụ ọrụ Africa.
Ndi atọ Andelans atọ bidoro na 2019, wee kpọọ ya '' onye nkasi obi '', e mepụtara Eden Life maka ndị ọrụ Lagos na-arụsi ọrụ ike bụ ndị na-adịkarị ogbenye n'ihi ogologo oge ọrụ ma na-agbasi mbọ ike inweta na ịhazi ndị na-enye ọrụ ụlọ na-atụkwasị obi, dị mma na ntụkwasị obi. .
Ngwa, dị na Google Play na App Store.
Ndị ọrụ nwere ike denye aha na otu ọrụ ma ọ bụ karịa ma tọọ ugboro ole ha chọrọ ka enyefe ọrụ ndị ahụ.
Ugbu a, nkezi onye ọrụ Eden Life na -eji ọrụ abụọ ugboro ise kwa izu na ndị ọrụ izizi na -amalitekarị site na nnyefe nri, tupu ịmalite ọrụ ndị ọzọ.
Ezubere na ndị isi, ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ, ndị okike, na ndị injinia teknụzụ na ndị mmepe, Eden Life na -ewepụ ihe mgbochi na -achọta ọrụ ezinụlọ a pụrụ ịdabere na ya na ime nke ahụ eburula ndị ahịa 600+ ngwa ngwa ma na -eto na -esochi ya na 92% ọnụego njigide kwa ọnwa na ihe karịrị 70% nke ndị ọrụ ọhụrụ na -abịa site na ndị nnọchite.
Igwe teknụzụ teknụzụ nke Eden Life na -enye ndị ọrụ ya ohere ịzaghachi nzaghachi n'akụkụ niile nke ọrụ, na -eji data iji chịkọta mmasị ma nye ndụmọdụ dabere na nzaghachi onye ọrụ.
Ngwa ahụ gụnyekwara nsuso oge nnyefe, ịkwụ ụgwọ na ịgba ụgwọ, yana ọkwa onye ọrụ, ndị ọrụ ubi na -ahụ maka ọrụ ubi - akụkụ mmadụ nke Eden Life - ndị ọkachamara zụrụ azụ na -arụ ọrụ na ndị na -enye ọrụ Eden Life na ndị ọrụ njedebe iji hụ na enweghị nsogbu. ọrụ.
Ihe owuwu siri ike nke ngwa ahụ emeela ka Eden Life nyefee ihe karịrị ọrụ 60,000 kemgbe mmalite ya.
“Maka ọtụtụ ndị ọrụ anyị, ọ bụrụ na ha na -esi nri ma ọ bụ na -arụ ọrụ, ha anaghị amị mkpụrụ; ha achọghị ihe ndọpụ uche n'ọrụ ha, nke bụ ebe Eden Life na -abata, ” kwuru Nadayar Enegesi, Onye-guzobere na Eden Life na ngalaba-nchoputa na Andela.
“Anyị ghọtara ọnọdụ a nke ọma. Anyị bụ ndị ahụ - yabụ anyị buru ụzọ chepụta ngwaahịa anyị wee chọpụta na mkpokọta, anyị bụ nnukwu nnukwu ahịa na Naịjirịa wee soro ndị ọkachamara ndị ọzọ sitere na ụdị ndụ niile tụọ Eden na mkpa chọrọ ọrụ dị mfe na -enweghị nsogbu. ”
Enegesi gara n'ihu: “Ọ bụ ezie na anyị enweghị ike iwepụtakwu oge n'anụ ahụ, anyị na -enye ohere ịnweta ikpo okwu na -enye ngwakọta enweghị ọrụ nke ọrụ ụlọ, ka ndị ọkachamara na -arụsi ọrụ ike nwee ike lekwasị anya n'ọrụ na ntụrụndụ ha.
Obi dị anyị ụtọ ịgbasa ikpo okwu anyị iji nye ọtụtụ ihe, wee gaa n'ihu na-enye ụfọdụ ọrụ kacha mma nke teknụzụ ụwa na otu ndị ọkachamara zụrụ nke ọma. "
Atụmatụ njikọta kwụ ọtọ, nke ego mkpụrụ akụ na -akwalite, ga -ahụ na Eden nwere ike nwe ma jikwaa usoro ọkọnọ ya niile wee nyefee ọrụ ya na -enweghị mkpa ndị na -enye ndị ọzọ site na inwe akara ukwu ebe ndị osi nri na -esi nri, enwere ike ịhazi akwa na ngwa ngwa yana ndị na -asacha ya. nweta ọzụzụ iji nye ọrụ dị elu.
N'ibido na ọrụ atọ dị mkpa-ndị kacha mkpa ime ka ụlọ bụrụ ebe nsọ-Eden Life ga-agbasa ọtụtụ ndị ọzọ n'ọnwa ndị na-abịanụ iji mee ngwa ahụ ka ọ bụrụ ngwa nkwụsị maka ijikwa ọrụ ụlọ na ndụ onwe onye.
“Anyị hụrụ ọhụụ Eden Life maka ọdịnihu ọrụ ụlọ n'Afrịka. Ezigbo ihe gbasara ndị ahịa na -anọdụ n'obi nke ihe niile ha na -ewu - a na -ahụ nke a na njigide ndị ahịa yana metrik ndị ọzọ, " Remus Brett, Onye Mmekọ Izugbe na LocalGlobe kwuru.
“Dị ka ndị na-etinye ego, anyị na-enwe mmasị mgbe niile na ụlọ ọrụ na-ebu ụzọ na-ebupute ngwaahịa n'ahịa ndị a na-emetụtaghị. Nchikota uru a na otu ndị isi gosipụtarala ahụmịhe nke iwulite teknụzụ Afrịka ruo ọkwa na -enweghị atụ na -eme ka ndụ Eden bụrụ ụzọ uto na -atọ ụtọ. "
Dị ka kọntinenti na -emepe emepe ngwa ngwa n'ụwa, a na -atụ anya na Afrịka ga -enwe obodo 100 nwere ọnụ ọgụgụ mmadụ karịrị otu nde ka ọ na -erule 2025.
Afrịka nwekwara ndị na -eto eto na -eto ngwa ngwa n'ike n'ike na -abawanye n'ike n'ike, ekele na akụkụ nke ngalaba teknụzụ na -eto eto.
N'inwe ọtụtụ mmadụ na-arụ ọrụ ogologo oge, Eden chọrọ ịgbanwe ahịa ahịa ụlọ site n'ime ka ndụ dịrị ndị ọkachamara na ndị isi ala na-enweghị oge nka na-adịte aka, na-enye ha ohere ịhazigharị oge ha n'ime ihe ndị na-arụpụta ihe yana inye ha oge ezumike dị mma. oge.
Foto egosipụtara: Otu Ndụ Eden